AmaNgqina KaYehova Akhulula Iwebhsayithi Ephuculiweyo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
AGASTI 15, 2012
Iwebhsayithi Yethu Iyaphuculwa
Abasebenzi abangamaNgqina kaYehova basebenze iinyanga ezithile kunye nesebe Lobugcisa neLokuzoba ukuze benze iwebhsayithi yethu ethi www.jw.org ibangele umdla, kuze kube lula ukuyisebenzisa ngekhompyutha nangefowuni. Baye bayiphucula becinga ngezi zinto zimbini.
1. Ukudibanisa zonke iiwebhsayithi zethu. Iiwebhsayithi ezintathu zamaNgqina kaYehova ziza kudityaniswa zibe yiwebhsayithi enye esemthethweni ethi—www.jw.org. Ezinye ezimbini ethi, www.watchtower.org nethi www.jw-media.org ziza kuyekwa.
Ukufaka yonke into kule webhsayithi kuza kunceda wonke umntu ofuna inkcazelo ngamaNgqina ayifumane kwindawo enye. Ngokomzekelo ungazifumanela, uzimamele okanye uziprinte iBhayibhile neencwadi ezithetha ngayo ngeelwimi ezininzi.
2. Ukongeza inkcazelo. Le webhsayithi iphuculiweyo ineempendulo ezingqalileyo zemibuzo yeBhayibhile yaye ithetha ngomsebenzi wokushumayela, iiofisi zamasebe, iiHolo zoBukumkani kunye neendibano zamaNgqina kaYehova. Icandelo “Leendaba” lithetha ngamaNgqina asehlabathini lonke. Kukho nezinye izinto ezibangela umdla zeentsapho, abantu abaselula kunye nabantwana.
Ngokusu nje, iimpapasho zethu zifundwa ngamakhulu-khulu abantu ngeelwimi ezingama-430 ezikhoyo kwiwebhsayithi yethu. Bazikhuphelela iimpapasho ezirekhodiweyo, ze-EPUB, zePDF okanye iividiyo zeNtetho Yezandla eziphantse zafika kwisiqingatha sezigidi. Suku ngalunye abantu abalikhulu bazicelela ukufundelwa iBhayibhile.
Iwebhsayithi YamaNgqina KaYehova Iyaphuculwa